Photoshop PSD Kudzoreredza Turu. PSD Repair Software. Gadzira Photoshop.
DataNumen PSD Repair ndiro yakanakisisa Photoshop kugadzirisa uye kudzoreredza chishandiso pasi. Inogona kugadzirisa yakaora kana yakakuvadzwa Photoshop PSD uye maPDD mafaera emifananidzo uye wozowana yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa muhuori hwefaira.
4.90 / 5 (kubva 1,453 mavhoti)
Sei DataNumen PSD Repair?
Ndinokutendai nekugadzira "DataNumen PSD Repair". Ini ndaive nemumwe mukuru
faira randanga ndakabatirira kwariri kubvira 2000. Yakagadzirwa
faira randanga ndakabatirira kwariri kubvira 2000. Yakagadzirwa mu
PhotoDeluxe, mune PDD vhezheni Photoshop yaisagona kuverenga.
Iwe hauzive kuti ndakafara sei kutarisa kumashure, kurodha pasi, uye kubudirira
dzorerazve software yako pane iyi faira rimwe chete.
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen PSD Repair v2.4
Kutsigira kuti uwanezve PSD uye maPDD mafaira akaburitswa neshanduro dzese dzeAdobe Photoshop.
Tsigiro yekudzoreredza mufananidzo pamwe nematanho akapatsanurwa
Tsigiro yekuwanazve mapikiseli, kukura, kudzika kwemavara uye palette yemufananidzo uye zvidimbu.
Tsigiro yekudzora isina kumanikidzwa uye RLE yakatsikirirwa mifananidzo.
Kutsigira kuti uwanezve PSD mufananidzo nekudzika kwe1, 8, 16, 32 mabheti pachiteshi.
Kutsigira kuti uwanezve PSD chifananidzo chine ruvara modhi yebitmap, grayscale, indexed, RGB, CMYK, mutlichannel, duotone, lab.
Kutsigira kugadzirisa PSD uye maPDD mafaera pane yakashatiswa midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch yemifananidzo ye Photoshop.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa iyo Photoshop faira faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo PSD uye maPDD mafaera kuti agadziriswe pakombuta yemutengi.
kushandisa DataNumen PSD Repair Kudzoreredza Yakakuvara Photoshop Mifananidzo
Kana yako Photoshop PSD mafaira emifananidzo akakuvadzwa kana kuora nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye haugone kuvhura kazhinji neAdobe Photoshop, unogona kushandisa DataNumen PSD Repair kuongorora iyo PSD mafaira uye dzosa iyo data kubva kumafaira zvakanyanya sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzorera chero chakakuvara kana chakaora PSD faira ne DataNumen PSD Repair, ndapota vhara Photoshop uye chero mamwe maapplication anogona kuwana iyo faira.
Sarudza iyo yakakuvara kana yakashata PSD faira ichagadziriswa:
Unogona kuisa iyo PSD faira zita zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo PSD faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
By default, DataNumen PSD Repair ichaongorora sosi PSD faira, dzoreredza iyo yakasanganiswa mufananidzo uye zvidimbu, uye chengeta ivo sevakaparadzaniswa mafaera emifananidzo. Iwo akadzorerwa emafaira emifananidzo anoburitswa mudhairekitori rakanzi xxxx_recovered, uko xxxx ndiro zita renyanzvi PSD faira. Semuenzaniso, for source PSD faira Yakakuvara.psd, iyo default kuburitsa dhairekitori yemaficha akadzorerwa emifananidzo ichave Damaged_recovered. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Baya bhatani, uye DataNumen PSD Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi PSD faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iri sosi PSD faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iyo yakasanganiswa mufananidzo uye zvidimbu zviri mu PSD faira richachengetedzwa mune dhairekitori rinobuda rakatsanangurwa nhanho 3. Uye iwe uchaona bhokisi remashoko rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iwo akadzoreredzwa mafaira emafaira mune yekubuditsa dhairekitori pamwe nezvinowirirana zvinoshandiswa.
DataNumen PSD Repair 2.4 inoburitswa muna Zvita 23, 2020
DataNumen PSD Repair 2.2 inoburitswa munaNovember 6th, 2020
DataNumen PSD Repair 2.1 inosunungurwa munaJune 11, 2020
DataNumen PSD Repair 2.0 inoburitswa muna Zvita 8, 2013
DataNumen PSD Repair 1.4 inoburitswa muna Kubvumbi 24, 2008
Rutsigiro ruzere kuWindows Vista.
Yepamberi Photoshop Kugadzirisa 1.1 inoburitswa munaNovember 22, 2005
Yepamberi Photoshop Kugadzirisa 1.0 inoburitswa muna Chikunguru 12, 2005
Chishandiso chine simba chekudzosera huori Photoshop mufananidzo (PSD, PDD) mafaera
Gadzirisa uye dzosera yakaora AutoCAD DWG mafaira